प्रचण्डले मान्लान् ओलीको प्रस्ताव ? | Safal Khabar
प्रचण्डले मान्लान् ओलीको प्रस्ताव ?
बुधबार, १२ पुस २०७४, ०९ : ४७
काठमाडौँ । वाम गठबन्धनलाई एकताको स्वरुप दिँदा संयुक्त नेतृत्वमा जाने हो या एकल नेतृत्वलाई सबैले अनुमोदन गर्ने हो भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रस्ताव सुनेपछि ओलीले जवाफ फर्काउँदै, ‘तपाईंको पो व्यवस्थापन सहज होस् भन्दै त्यस्तो अनुरोध गरिएको हो । यदि अरु नै बनाउनुपर्ने भए विद्याजी नै हुनुहुन्छ नि,’ भनेको र प्रचण्ड रिसाएर जिल्लातिर लागेको माओवादी हेडक्वाटरमा चर्चा छ ।